स्यानिटाइजर किन्दा ध्यान दिनै पर्ने तीन कुरा ! - नेपालबहस
स्यानिटाइजर किन्दा ध्यान दिनै पर्ने तीन कुरा !
| ११:४९:४२ मा प्रकाशित
२४ भदौ, काठमाडौं । के तपाईले बजारमा स्यानिटाइजर किन्नु भएको छ वा किन्न जानु लाग्नु भएको छ । यदि तपाई स्यानिटाइजर किन्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईले ध्यान दिनै पर्ने तीन कुरा छन् ।
कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएयता विश्वभरि यो रोगसँग जुध्न तीनवटा सामान्य विधि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र धेरै देशका सरकारहरूले अघि सारिरहेका छन्। नेपाल सरकारले पनि सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग अनि बेलाबेला साबुन वा स्यानिटाइजरले हात सफा गर्न आह्वान गरिरहेको छ।
व्यक्तिगत सरसफाइलाई कोरोनाभाइरसबाट जोगिने उत्तम उपाय मानिएको छ। त्यसका लागि घरभित्र बस्दा साबुनपानीको प्रयोग बढी प्रभावकारी र किफायती मानिन्छ। तर तपाई हामी बाहिर निस्किँदा साबुनपानी प्रयोग गर्न सम्भव नहुने हुँदा तत्काल हात सफा गर्न स्यानिटाइजर उचित मानिन्छ।
स्यानिटाइजरबारे नेपालमा कुनै विस्तृत अनुसन्धान त भएको छैन तर मुख्य नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले गर्दै आएको निरीक्षण अनुगमनमा कतिपय गुणस्तरहीन हुनसक्ने पाइएको छ। त्यसैले हामी बजारमा गएर स्यानीटाइजर किन्दै छाै भने हामीले अब खासगरी तीनवटा विषयमा ध्यान दिनस पर्ने छ ।
अल्कोहलको मात्रा: कुनै पनि स्यानिटाइजर किन्दा त्यसको लेबल हेरेर त्यसमा अल्कोहलको मात्रा ७०-८० प्रतिशत भएको खण्डमा मात्र किन्नुपर्छ ।
दर्ता: नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भए वा नभएको पहिल्याउनुपर्छ ।
रङ्गरूप: झट्ट हेर्दा खेरि नै त्यसमा अन्य मिसावट भए वा नभएको निर्क्योल गर्नुपर्छ ।
बजारमा अहिले उपलब्ध सबै प्रकारका स्यानिटाइजर कोरोना भाइरस मार्न कति प्रभावकारी छन् भन्ने जान्न विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा सरसफाइबारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुनाले स्यानिटाइजरको महत्त्व अत्यधिक बढिरहेको छ। यसैले नियामक निकायहरूले यसको गुणस्तर र प्रभावकारिताबारे पनि ध्यान दिइरहनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
आर्थिक अबस्था उकास्ने काममा लघुवित्त संस्थाहरुको भुमिका महत्वपूर्ण ७ घण्टा पहिले
चीनको अर्थतन्त्र २.० प्रतिशत बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण ७ घण्टा पहिले
कोरोना खोपका लागि ३५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक ७ घण्टा पहिले
वालिङको आइसोलेशनमा रहेका संक्रमित पुरुषको मृत्यू ८ घण्टा पहिले
रुसबाट ल्याइने कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन नेपाल कहिले आउँछ ? ८ घण्टा पहिले
कोरोनाले सुनसान बन्यो जनज्योति ! ८ घण्टा पहिले
हैदरावादले दिल्लीलाई दियो १६३ रनको लक्ष्य, बेयरस्टोको अर्धशतक ७ घण्टा पहिले
आँधीखोला आयोजनाको अध्ययन छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन ७ घण्टा पहिले
गैरकानुनी रुपमा विदेश गएकालाई उद्धार गर्न र उडान संख्या थप्न सरकारलाई निर्देशन ७ घण्टा पहिले
रङगशाला सरसफाइ ७ घण्टा पहिले
क्यालिफोर्नियामा डढेलोले १५ हजार वर्ग किलोमिटर जङ्गल विनास ७ घण्टा पहिले
मध्य अफगानिस्तानमा बिस्फोट हुँदा १५ जनाको मृत्यु ७ घण्टा पहिले
रसिया–कोरिया द्विपक्षीय व्यापार २५ अर्ब डलर नजिक ७ घण्टा पहिले
राष्ट्रसंघ भन्छ : पछिल्ला वर्षहरुमा अफ्रिकाबाट ८०० अर्ब डलर बाहिरियो ! ७ घण्टा पहिले
नागरिकले प्रहरीलाई र प्रहरीले नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक:-डीआईजी पोखरेल ८ घण्टा पहिले
आज २०७७ असोज १३ गते मंगलबारको राशिफल २१ घण्टा पहिले
आज ट्रम्प र बाइडेनबीच पहिलो बहस हुँदै २० घण्टा पहिले